नक्सा प्रकाशनमा सुझाव, निर्देशन र निर्णयकाे अन्तर्य ध्यान र निशाना कहाँ छ ? - Complete Nepali News Portal
यसरी दिउँसै रात पार्ने तथ्यहीन कुरा गर्नुकाे साटाे बरू अाफू प्रधानमन्त्री रहेकाे बेला पहिल्यै याे नक्सा यसैगरी प्रकाशित गरेर इतिहास रचेकाे भए हुँदैनथ्याे हाेला र ? मात्र निर्देशन दिएकाे भरमा हुने यति सजिलाे काम किन आफैले नगरेकाे हाेला ?
अनि अहिलेकाे सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आेलीले नै याे काम गर्नुपरेकाे हाे त ? किन उहाँलाई कृपा गरेर याे अवसर दिइएकाे हाे त ?
नक्सा प्रकाशन गर्ने भनी सरकारलाई दिएकाे निर्देशन यसमा खाेई कहाँनेर छ ? शुरूमा यस किसिमकाे तथ्यहीन दावी गरिए पनि याे पुष्टि नहुँदा फेरि बाेली बदलिन पुगेकाे छ । “मेराे अध्यक्षतामा भएकाे स्थायी किटी वा सचिवालयकाे बैठकले गरेकाे निर्णयअनुसार” भन्नुपर्ने सकसचाहिं किन गरिरहनु परेकाे हाेला ? प्रधानमन्त्रीले हाेइन, म र मैले भन्नुपर्ने खण्ड र बाध्यता किन आइपरेकाे छ ?
त्यस्ताे निर्णय कुन वक्तव्यमा, कुन मितिमा र कहिले सार्वजनिक छ ? पार्टी प्रवक्ताले कति गते र कति बजेकाे मिडिया ब्रिफिङमा याे सार्वजनिक गर्नुभएकाे छ ? कुन अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टी पंक्तिलाई र कुन पत्राचारमार्फत सरकारलाई जानकारी गराइएको छ ?
पार्टी एकीकरण कुन जग, अथाेरिटी, सहमति र घाेषणामा भएकाे हाे ? एजेन्डा तय गर्ने, छलफल गर्ने, निर्णय लिने र सहमति गर्ने कसरी हाे भनिएकाे छ ?
भागबण्डा कसरी भएगरेकाे हाे ? समय समयका निर्णय कसरी र के के भएका छन् ? यी र यस्ता जिज्ञासाहरूसँगै याे प्रश्न विशेष रूपमा उठेकाे छ, ध्यान र निशाना कहाँ छ ? गतिविधि के कस्ता भइरहेका छन् ?
आफ्नाे पार्टीकाे सरकारले गरेकाे काम, जसमा सिंगाे राष्ट्र एकढिक्का बनेकाे छ, यसमा विवाद र भ्रम किन ? कसकाे स्वार्थ र चाहनामा याे सब भइरहेकाे छ ?
विपक्षी दलका नेताकाे यसमा कुनै गुनासाे र हीनता प्रकट नहुने, सत्ताधारी दलभित्र किन उछिनपाछिनकाे हाेडबाजी चलिरहेकाे छ ? अनि याे मपाईंत्व प्रदर्शन किन ?